Zvipatara Zvomanikidzwa Kutambira Varwere Vese
Hurumende yazivisa kuti zvipatara zvese munyika zvinofanira kutambira varwere vese uye kuvavheneka kuti vane Covid-19 here kana kwete zvisinei kuti vakambongororwa here kana kuti kwete.
Hurumende yati zvipatara zvinotyora murawu uyu zvicharangwa zvakaomara.
Vachizivisa vatori venhau zvakabuda mumusangano wedare remakurukota wakaitwa neChipiri, vakafanobata chinzvimbo chegurukota rezvekuburitswa kwemashoko, Amai Sithembiso Nyoni, vati hurumende yakaita chisungo chekuti murwere wese anenge aenda kuchipatara atambirwe zvisinei kuti akavhenekwa Covid -19 here kana kuti kwete.
Amai Nyoni vatiwo zvipatara zvose zviri munyika zvinofanira kuvheneka varwere zvese uye kuona kuti hapana murwere anodzoserwa kumba asina kubatsirwa nezvipatara izvi.
Danho ratorwa nehurumende rinotevera kuchema chema kwevanhu vakawanda vanga vachitadza kurapwa kana vasina kuburitsa magwaro ekuti vakavhenekwa Covid-19, uye kufira mudzimba kwevanhu vakawanda vachitadza kurapwa nepamusana pekuti vanenge vasina magwaro anoratidza kuti vakavhenekwa Covid-19.
Vatiwo hurumende iri kupinza basa vamwe vakoti nekugadzirisa zvichemo zvevakoti, vanachiremba nevamwe vashandi vezvehutano apo iri kusimbaradza basa rekurwisana neCovid-19.
Gurukota rezvemari, VaMthuli Ncube, vatiwo kudomwa kwemumwe wevatevedzeri vemutungamiriri wenyika, VaConstantine Chiwenga, segurukota rezvehutano, kuchasimbaradza bazi rezvehutano.
Asi vaimbove gurukota rezvehutano muhurumende yemubatanidzwa, Dr Henry Madzorera, vati hazvidi chisungo chedare remakurukota kuudza vana chiremba kuti voshanda sei sezvo dziri nyanzvi dzinoziva kuti basa rinoitwa sei panguva yematenda akaita seCovid-19.
Mubati wehomwe musangano remachiremba emuzvipatara zvehurumende, reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr Tapiwa Mungofa, vanobvumirana naDr Madzorera vachiti chikuru chinodiwa kuti vana chiremba vave nezvikwanisiro zvinoita kuti vakwanise kurapa varwere vese zvisinei kuti vane Covid-19 here kana kuti chirwere chipi zvacho.
Zvichitevera kuderedzwa kwenguva yekuchengeta zvitunhu kuSouth Africa nekuds kweCovid-19, Amai Nyoni vati hurumende yakaita chisungo chekuti muzinda weZimbabwe muSouth Africa utambire magwaro kubva kumasabhuku pamwe madzishe pakuunza mitumbi yevanhu vanofira kuSouth Africa.
Asi VaMadzorera vati zvinenge zviri nani munguva ino yechirwere cheCovid-19kuti vanenge vafira kuSouth Africa vavigwe ikoko kana kuti vakauya kuno vatorwe sekuti vanenge vafa neCovid-19.
Amai Nyoni vayambairawo vanonyora manyepo pamusoro pechirwere cheCovid 19 pamadandemutande kuti vasiyane nazvo vachiti vanoramba vachiita izvi vacharangwa pasi pemutemo wekudzvirira kupararira kwechirwere ichi.
Amai Nyoni vazivisawo kuti dare remakurukota rakaita chisungo chekudzika mutemo wekuranga vese vanonyomba kana kutaura zvakashata pamusoro penyika yavo.
Vatiwo mitemo iripo ichasimbaradzwa kuti vese vanotaura zvakaipa pamusoro penyika yavo pamadandemutande, mapepanhau, dzinhepfenyuro kana pamisangano, varangwe.
Asi gweta rinorwira kodzera dzevanhu, VaJeremiah Bamu, vaudza Studio7 kuti kana hurumende ikaenderera mberi nekudzika mitemo inovhara miromo yevanhu kuti vasaburitse pfungwa dzavo kunenge kuti kumbunyikidza vana veZimbabwe.
Vakawanda vasiri kufara nehurumende vari kushandisa nzira dzakasiyana siyana kusanganisira madandemutande nedzimwe nzira kutaura zvichemo zvavo izvo zvisiri kufadza hurumende.
Asi Amai Nyoni vati vasingafare vanofanira kutaura nehurumende kwete kuinyomba kana kutaura zvakaipa pamusoro payo izvo vati zvinokanganisa chimiro chenyika.